အဖြစ်ကတော့သည်လိုပါ။ လူသားစားလူရိုင်းတွေရှိရာကို ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်း ဟောဖို့အလာ သူ့ကို ခုတ်မယ်၊ ဖြတ်မယ်၊ စားမယ်ဆိုပြီး လူသားစားလူရိုင်းတွေလိုက်လာပါလေရော. . .။ ရန်သူကိုချစ်ရမယ်၊ ကိုယ့်ပါးတစ်ဖက်အရိုက်ခံရရင် ကျန်တဲ့ပါးတစ်ဖက်ပါပေးပြီး အရိုက်ခံလိုက်ပါလို့ သမ္မာကျမ်းစာက ဆိုထားပေမယ့် ကိုယ့်အသားတော့ဘယ်အစားခံနိုင်ပါ့မလဲ. . . ဟုတ်ဘူးလား.. ပြေးရတော့ဒါပေါ့။ မြို့မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ မြို့သားနဲ့ တောမှာတစ်သက်လုံးကျင်လည်၊ ကျက်စားခဲ့တဲ့လူရိုင်းတို့ရဲ့ အပြေးပြိုင်ပွဲက ကြာကြာတော့ မခံပါဘူး။ မောင်လူအေးရဲ့နောက်ဆုံးအကြံကတော့ တောသားလူရိုင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းကို ပြောပြပြီး လူလူချင်းတစ်ဦးကိုတစ်ဦးချစ်ဖို့ ဖြောင့်ဖျ ပြောဆိုမယ်ပေါ့. . .။ အမြန်ဆုံးဆုတောင်း ကိုလူရိုင်းရှေ့မှာ ဒူးထောက်ပြီး တတ်သမျှ၊ မှတ်သမျှ တရစပ်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုလူရိုင်းက သဘောပေါက်ပုံမရပါဘူး ကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်… လှံကြီးတကားကားနဲ့ အကြီးအကျယ်အော်ဟစ်နေတယ်။ မောင်လူအေးလည်း တတ်သမျှ မှတ်သမျှနဲ့ ခပ်ကြောက်ကြောက်ပြန်မေးလိုက်တယ်. . . ဘာလုပ်တာလည်းပေါ့. . . ။ လူရိုင်းရဲ့ အဖြေကြောင့် မောင်လူအေးခမျှာ ရီရမလို. . . ကျေးဇူးတော်ဘဲချီးမွမ်းရမလို. . . ငိုရမလိုဖြစ်သွားတယ်။ ကိုလူရိုင်းပြောသွားဒါကတော့. . “ဒီနေ့တမနက်လုံး အစာရှာဒါ . .အခုမှ အစာရလို့ .. အစားအစာအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဒါ ကွ”. . . ဟူသတတ်။
This entry was posted on February 1, 2011 by thawngno in Articles Christian Life, Thawngno and tagged Love, Thawngno.	Shortlink